काठमाडौं, ११ असार । मानवीयता हराएपछि मानव मानव जस्तो लाग्दैन। जब चेतना गुम हुन्छ तब उ जिउँदो लास जस्तै बन्छ। झापा विर्तामोडको एक घटना नियाल्दा यहि कुरालाई मलजल गर्छ। यहाँ एकातर्फ मानवीयता हराएका शक्तिशालीहरूका......
काठमाडौं । आवातजावतको शैली र राहदानीको स्थितिले आशंका जन्माउँछ कि अस्तिमात्रै फर्केकी श्रीमती प्रभासँग यदि अमेरिकाको ग्रिनकार्ड छ भने यो नाताले पतिलाई समेत भिसा नलाग्ने पृष्ठभूमिबीच थाहा पाएर वा नपाएर हो, फेरि उनैलाई राजदूत......
जनकपुर । २५ वर्षअघिसम्म जनकपुरमा टोलैपिच्छे मन्दिर र कुटी भेटिन्थे । यतिबेला ती मन्दिर र कुटी छैनन् । मन्दिर र कुटी त हराए–हराए, भगवान्का मूर्ति पनि गायब भए । अहिले बाँकी छन् त केही......
काठमाडाैं, २८ जेठ । आज प्रकाशित नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, नयाँ पत्रिका र राजधानीमा छापिएको रविन सायमि, बासु क्षितिज, रवि मिश्र र उत्तम नेपालको कार्टुनः...
काठमाडौं । सोलखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट २५ कोस टाढा पर्छ महाकुलुङ गाउँपालिका । उक्त गाउँपालिका सोमबार दिनभर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा परिरह्यो । सञ्चारमाध्यमका लागि त्यो ठाउँ दिनभर चासो र खोजीको विषय बनिरह्यो । कारण हो......
काठमाडौँ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा एभन्यिूज टेलिभिजनद्वारा निर्मित कार्यक्रम बारे बहस चर्किएको छ । पत्रकार शुशील पाण्डे र नेपाल सरकारका वरिष्ठ मन्त्री एवम् समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको अन्तर्वार्ताका क्रममा मनमालिन्यता बिग्रिएपछि विभिन्न स्तरबाट......
काठमाडाैँ, १७ बैशाख । देउवा नेतृत्वको तत्कालीन गृह मन्त्रालयले अध्ययनविना मालपोतलाई पत्र पठाउँदा बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको पत्ता लागेको छ । बालुवाटारको जग्गाको विषयमा देउवाले सोमबार संसद्मा कड्किएर भने ‘बालुवाटारको सरकारी......
काठमाडौं । प्राविधिक रुपमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नभएको अमेरिकाको नासाले जनाएको छ । माउन्ट एभरेस्टको नामले पनि विश्भरि चिनिने सगरमाथा समुदि« सतहको हिसाबले मात्र सर्वोच्च रहेको बताइएको छ । तर यदि फेद देखिको उचाई......
काठमाडौं, जेठ १ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १२ सम्मको पाठयक्रम परिमार्जन गर्न लागेको छ । उसले विद्यालय तहमा समाजवादउन्मुख शिक्षा दिने गरी पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको छ । केन्द्रका अधिकारीहरूले समाजवादउन्मुख शिक्षा पाठ्यक्रममा......
काठमाडौं, जेठ १ । कर्मचारीले बहुविवाह गरेमा वा मदिरासेवन गरी पटकपटक कार्यालय आएमा त्यस्ता कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान राख्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा गरेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले......
काठमाडौं, जेठ १ । सत्ता–सहयात्री दल एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका क्रममा मतभेद चुलिन थालेको छ । पार्टी एकता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको नेताहरूले बताइरहँदा केही दिनयता सरकार सञ्चालनलाई लिएर दुवै पार्टीबीच मतभेद फराकिलो हुँदै......
काठमाडौं, ववैशाख ३१ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुगे पनि अझै ३७ जिल्लाका ४८ गाउँपालिकामा सडक पुगेको छैन । साविकका दुई सय ५९ गाविसमा सडक पुगेको छैन । साविकका ती गाविसबाटै ४८ गाउँपालिकाको......
मोदीले भने- लोकतन्त्र सुरक्षित भएमात्र सम्बन्ध प्रगाढ
काठमाडौं, ववैशाख ३० । दुईदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार नेपालका विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको दर्शनपछि आफू बसेको होटल हायातमै मोदीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित......
आठपटक ताकेता गर्दा पनि बनेनन् कानुनका मस्यौदा
काठमाडौं, वैशाख २९ । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुनले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने भए पनि अझै ४१ वटा कानुन निर्माणकै चरणमा छन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आठपटक ताकेता गरिसक्दा......
के के भयो ओली–मोदी वार्तामा ?
काठमाडौं, वैशाख २९ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार १५ मिनेट एकान्त वार्ता भएको छ । दुईपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भने ४५ मिनेट औपचारिक वार्ता भयो । वार्तामा ओलीको भारत भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा......
काग्रेसमा शशांकले के गुट वदल्न लागेका हुन् ?
काठमाडौं, वैशाख १८ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र डा.रामशरण महतले मोर्चाबन्दी गरिरहेका बेला महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले समन्यवकारी भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन्। बिहीबारसम्म सोही मोर्चामा रहेका......
गृहसहित ५ दर्जन बढी सरकारी निकायका वेबसाइटमा ह्याकरको पहुँच
काठमाडौं, वैशाख १८ । सरकारी निकायका ५ दर्जनभन्दा बढी वेबसाइटमा केही दिनयता समस्या देखिएको छ । ती वेबसाइट ह्याकरले नियन्त्रणमा लिई चेतावनी शैलीमा सामान्य प्रभावित पारेका छाडेका हुन् । तर सम्बन्धित कार्यालयले यसलाई सुधार्न......
राष्ट्रिय सभा सदस्य पदावधि विवाद : गोलाप्रथामा सांसदका फरक मत
काठमाडौं, वैशाख १८ । राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधिबारे एमाले–माओवादी र अन्य दलबीच विवाद भएको छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदमध्ये एकतिहाइको पहिलो २ वर्षमा, अरू एकतिहाइको ४ वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष कार्यकाल हुने संवैधानिक......
काठमाडौं, वैशाख १८ । शंख, घण्ट, डमरु बजाउँदै सोमबार बिहान सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईसहित ५ जना वटुक मुख्य रजिस्ट्रारको कक्षभित्रबाट श्रीयन्त्र बोकेर निस्किए। ८ जना वटुकले पशुपतिबाट......
नेपाली युवतीको अपहरणपछि ओमनमा सामूहिक बलात्कार
काठमाडौं, वैशाख १७ । ओमनको मावेलामा ६ बंगालीद्वारा अपहरणपछि बलात्कृत भएकी एक नेपाली घरेलु कामदारलाई ओमनी प्रहरीले शनिबार उद्धार गरेको छ । प्रहरीले उनलाई निर्माणाधीन घरको शौचालयबाट उद्धार गरेको हो । उनी प्रहरीको संरक्षणमा......